Wafdi ka socda Kenya oo ku wajahan Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya iyo Soomaaliya ayaa xiriirkooda soo celiyay bishii May kadib lix bilood oo meesha ka maqnaa, waxaana xumeeyay Farmaajo Dec 2020.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya Raychelle Omamo ayaa la filayaa in berri oo Axad ah soo gaarto Muqdisho, kadib markii ay casuumaad ka heshay dhigeeda Soomaaliya Maxamed C/risaaq.
Xogo Keydmedia Online ka heshay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa sheegaya in Raychelle Omamo ay la kulmi doonto Ra'iisul Wasaare Rooble, oo casumaad uga wada Madaxweyne Uhuru.
Sida uu qorshaha yahay, Rooble ayaa Talaada soo socota booqasho ku tagaya Kenya, isagoo wadahadallo sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada dal la qaadan doona Uhuru, oo damaciisu yahay kiiska badda in lagu xaliyo meel ka baxsan ICJ.
Kenya iyo Soomaaliya ayaa xiriirkooda soo celiyay bishii May 2021 kadib lix bilood oo meesha ka maqnaa, waxaana xumeeyay Farmaajo Dec 2020, sababo ololihiisa doorashadda ku saabsan.
Kenya waxay kaloo doonaysaa inay dowladda Soomaaliya u fasaxdo Qaadka Miraa in dalka la keeno, kaasoo mudo ku dhaw labo sano xayiraad saaran tahay, wuxuuna Farmaajo uga sameeyay Mashruux walaalkiisa Xasan Qaadka Itoobiya.
Kenya waxaa Soomaaliya ka jooga illaa 4,000 oo askari oo qeyb ka ah AMISOM, kuwaasoo xoogooda difaaca Maamulka Axmed Madoobe, oo lagu ilaaliyo magaaladda Kismaayo.